Iziqithi zeCanary 'zikhuselekile' utsho umphathiswa njengoko abantu abangama-5,000 XNUMX bebaleka ukuqhuma kweLa Palma
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » ISpain Iindaba Eziphambili » Iziqithi zeCanary 'zikhuselekile' utsho umphathiswa njengoko abantu abangama-5,000 XNUMX bebaleka ukuqhuma kweLa Palma
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
"Akukho zithintelo ekuhambeni kwesi siqithi ... ngokuchaseneyo, sidlulisa ulwazi ukuze abakhenkethi bazi ukuba bangahamba baye kwesi siqithi kwaye bonwabele into engaqhelekanga, bazibonele ngokwabo," utshilo uMphathiswa Wezokhenketho eSpain uReyes Maroto.
Ukuqhuma kwentaba-mlilo iLa Palma kutshabalalise ubuncinci amakhaya angama-20 kwaye kwanyanzeleka ukuba kukhutshwe abantu abangama-5,000 XNUMX.
Ukuza kuthi ga ngoku, amagosa asebenze ngempumelelo abantu abamalunga ne-5,000 abavela kwiilali ezininzi e-El Paso naseLos Llanos de Aridane.
Ngokuka-Mphathiswa Wezokhenketho wase-Spain u-Reyes Maroto, ii-Canary Islands zikhuselekile ukuba zingatyelelwa kwaye kuqhambuke intaba-mlilo kukho "umboniso omangalisayo".
Ukuqhuma kwentaba-mlilo kwisiqithi seCanary Islands iLa Palme kutshabalalise ubuncinci amakhaya ali-100 kwaye kwanyanzeleka ukuba kukhutshwe abantu abangama-5,000 XNUMX, amakhulu abanye abasemngciphekweni wokuhamba komdaka okhulayo, ekulindeleke ukuba kubangele iigesi eziyityhefu xa zifika elwandle .
Usodolophu wase-El Paso, eLa Palma, uSergio Rodriguez Fernandez ulumkise ngelithi ilali ekufuphi yaseLos Llanos de Aridane isemngciphekweni, amagosa “ejonge umkhondo wentaba-mlilo” emva kokuqhushumba kwentaba-mlilo ngeCawa emva kwemini.
Iifoto ezibanjiweyo emva kogqabhuko-dubulo zibonise udaka luhamba amakhulu eemitha emoyeni, luthumela inkunkuma ye-volcanic kuLwandlekazi lweAtlantic nakwimimandla enabantu baseLa Palma, eyinxalenye Iziqithi zeSpanish Canary.
Amagosa aphume ngempumelelo kubantu abangama-5,000 XNUMX abavela kwiilali ezininzi e-El Paso naseLos Llanos de Aridane. Ngelixa udaka lusasazeka, akusekho kuphuma kucwangcisiweyo ngoku. Akukho monakalo okanye ukubhubha okuxeliweyo, ugqirha wentaba-mlilo uNemesio Perez esithi akukho namnye kulindelweyo, ukuba nje abantu baziphethe kakuhle.
Malunga ne-360 yabakhenkethi basuswa kwindawo yabakhenkethi eLa Palma emva kogqabhuko-dubulo basiwa kwisiqithi esikufutshane saseTenerife ngesikhephe ngoMvulo, utshilo isithethi somqhubi wenqanawa uFred Olsen.
Abanye abakhenkethi abali-180 banokukhutshwa eLa Palma kamva emini, isithethi songeze.